Fabric And Apparel Patternmakers Job Description / Functions များနှင့် Duty နမူနာ - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / Fabric And Apparel Patternmakers Job Description / Functions များနှင့် Duty နမူနာ
Fabric And Apparel Patternmakers Job Description / Functions များနှင့် Duty နမူနာ
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized6မှတ်ချက်များ 557 views
Tag concluded styles with information such as garment dimensions, section, ပုံစံ, မှတ်မိခြင်း, and stitches directions and products.
Study blueprints, Template articles, and layout specifications to ascertain quantities, ပုံစံများ, and sizes of structure pieces, also to decide the total amount of material or substance needed to produceasolution.
Active Listening-Giving total attention to what other folks are saying, သင်ဖန်တီးထားသောခံရအချက်တွေကိုနားမလည်ဖို့အတှကျအခြိနျယူ, စံပြအဖြစ်အံ့သြမေးခွန်းများကို, rather than mesmerizing at unacceptable moments.
Criticalthinking-Applying reason and reasoning to recognize flaws and the talents of alternate options, ဒုက္ခမှကောက်ချက်သို့မဟုတ်နည်းလမ်းများ.
Checking-OverseeingANDExamining efficiency of oneself, ကွဲပြားခြားနားသောတစ်ဦးချင်းစီ, or companies to create advancements or consider remedial action.
othersI လှုပ်ရှားမှုများပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူ control-မွမ်းမံလုပ်ရပ်များ.
installation-Installing tools များ, မော်ဒယ်များ, ဝါယာကြိုး, သို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့ packages များ.
Function Monitoring-Observing calls, စမ်းသပ်မှုများ, or other signals to make sure an equipment is performing properly.
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးအကဲဖြတ်-ဖျော်ဖြေစစ်ဆေးမှုများနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏စုံစမ်းစစ်ဆေး, ဖြေရှင်းနည်းများ, သို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်များထိရောက်မှုသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူရန်.
Systems Analysis-Deciding howaprocess should work and how alterations in the environment, လုပ်ငန်းဆောင်တာ, and also ailments will affect benefits.
Supervision of Financial Resources-Determining how income will soon be spent to acquire the task performed, ဤကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်. အရောင်း.
ဝန်ထမ်းရေးရာအရင်းအမြစ်များ-အားပေးမှုအုပ်ချုပ်ရေး, ကို, and guiding persons as they operate, identifying the most effective persons for your career.
Connect ကိုရဲ့ဘွဲ့ (သို့မဟုတ်အခြား 2-တစ်နှစ်ဒီပလိုမာ)
ထက်ပိုပြီး6နှစ်ပေါင်း, အထိ 8 နှစ်နှင့်အပါအဝင်
ဆုံးဖြတ်ချက် – 91.61%
ကြိုးစားအားထုတ်မှု – 90.54%
ထိန်းချုပ်ရေး – 81.22%
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – 93.32%
အခြားသူများအဘို့စိုးရိမ်ပူပန်မှု – 87.38%
လူမှုအရှေ့တိုင်းဆန် – 88.86%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 88.89%
ဖိအား Threshold – 85.78%
customization / Mobility ကို – 87.17%
တည်ငြိမ်ခြင်း – 91.56%
ရှုထောင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက် – 88.61%
သမာဓိရှိခွငျး – 92.49%
လွတ်လပ်ရေး – 82.89%
တိုးတက်ခြင်း – 86.25%
စဉ်းစား – 85.26%
ဧပြီလ 10, 2019 တွင် 1:43 နံနက်
ကန်ထရိုက်စာချုပ်များ. Ӏ qualified by sitging tһe New york city bbar
ဧပြီလ 20, 2019 တွင် 12:47 ညနေ
ဧပြီလ 25, 2019 တွင် 11:13 ညနေ
ဧပြီလ 30, 2019 တွင် 5:17 နံနက်
Pingback: Using Effective Twitter Job Search Tools – veg-နက်နဲသောအရာ